ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးလုပွဲကြီး စတင်ပါပြီ (မြန်မာလို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေ ကြုံရမယ့် အခက်အခဲများ) - Zet Star
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးလုပွဲကြီး စတင်ပါပြီ (မြန်မာလို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေ ကြုံရမယ့် အခက်အခဲများ)
December 14, 2020 ZCC News	0 Comments
ဒုတိယပြဿနာက ဆေးထုတ်တဲ့ စက်ရုံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကို ခွဲပေးရမယ်၊ ဥပမာ Pfizer က ဘယ်လဂျီယံမှာ ဆေးထုတ်တာ မနိုင်လို့ အိန္ဒိယမှာ ဆေးလာထုတ်ရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြေနပ်အောင် ဆေးရောင်းပေးရမယ်။ First come first serve ပဲ။ capitalism ဆိုတာ ချမ်းသာသူ ဥာဏ်ကောင်းသူ နိုင်သူစား စတမ်း။ ပထမ ဆေးဝယ်တဲ့ သူဌေးနိုင်ငံတွေ၊ ဒုတိယ ဆေးထုတ်တဲ့ အလုပ်သမား နိုင်ငံတွေ ပေါ့။ သူတို့ကျော်ခွပြီး ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကို မလာနိုင်သေးပါဘူး။ စစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေ စိတ်ကြေနပ်သွားအောင် တသန်းနှစ်သန်းတော့ ရောင်းပေးကြမှာပါ။
မြန်မာကိုဘယ်က ဆေးလာမလဲ? ရုရှဆေး Sputnik V vaccine တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောတယ်၊ အော်ဒါတက်တာတောင် တဘီလီယံ ရှိပြီတဲ့။ အင်္ဂလန်က Oxford AstraZeneca ကာကွယ်ဆေး က ဆေးပိုထွက်အောင် ရုရှရဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပေါင်းထုတ်မယ်ပြောတယ်။
တရုတ်ဆေးလည်း အလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ အော်ဒါမှာထားလားမသိဘူး။ တရုတ်ကတော့ သူ့နိုင်ငံသားတွေအကူးခံရမှာစိုးတော့ အိမ်နီးချင်းတွေနဲနဲဝေမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကို ဆေးရောင်းပေးပါလို့ WHO ကတဆင့် အဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့ Covex အဖွဲ့ မှာ နိုင်ငံ ၁၈၀ ကျော်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ မကုန်ခင် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက် ဆေး တဘီလီယံ ရဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ WHO ကပြောတယ်။
ဒီတော့ နောက် ၁၂ လအတွင်း မြန်မာပြည်ထဲက လူ၁၀ ယောက် မှာ တယောက် လက်မောင်းမှာ အပ်လာစိုက်ဖို့ မသေချာသေးပါဘူး။ ဒီကြားထဲ ဆေးများများထွက်လာဖို့၊ ကာကွယ်ဆေး အပြင် ကုသဆေးပါ ရှာတွေ့ဖို့၊ နိုင်ငံကြီးတွေ ဆေးနဲနဲထိုးပြီးတာနဲ့ ရောဂါပျောက်ကုန်ကြဖို့ ဆုတောင်းကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ အနည်းဆုံး နောက် ၆ လ ကိုဗစ်နဲ့ လုံးထွေးနေရဦးမယ်။ ကဲ ကပ်ရောဂါပဲ မထူးပါဘူး လု့ကံ ဝ ကံပေါ့ ဆိပြီး ဒီအတိုင်းဆက်သွားမလား? သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး လုံးဝ မထွက်ကြနဲ့ လို့ အိမ်ထဲ နှစ်ပါတ် နေခိုင်းတာကောင်းမလား? ဘယ်လောက်ကူးနေပြီလဲ? ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ? အစိုးရလည်း စဉ်းစားရကြပ်မှာပေါ့။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ၈ လရှိပြီဆိုတော့ လွန်တာတော့ လွန်ကုန်ပါပြီ။ ပြောချင်တာက မြန်မာပြည်ထဲ ဆေးရောက်လာဖို့ မလွယ်သေးဘူး ဆိုတာရယ်… Mask တပ်ဖို့၊ လူစုလူဝေးရှောင်ဖို့နဲ့ ကာလကြာရှည်စွာ ကိုဗစ်နဲ့ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲ။
← မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံအုပ်ကြီး ရေးတဲ့ “စျေးပေါပေါ ဆေးရုံအုပ် ကျွန်မ”
မရမ်းကုန်းမှာ (၁၀) ပေ ရှည်တဲ့ ညမင်းသား စပါးအုံးမြွေကြီး တစ်ကောင် ထပ်တွေ့ပြန်ပြီ →